Maskaxdii Ka Dambeysay Dilka Madaxweynihii Haiti Oo La Shaaciyay - Caa...
Port-au-Prince (Wararka Maanta) – Taliyaha booliska Colombiya ayaa shaaca ka qaaday magaca qof uu sheegay inuu amray dilkii madaxweynihii Haiti Jovenel Moise.
Sarkaal horay uga tirsanaa wasaaradda cadaalada Haiti oo la yirahdo oseph Felix Badio ayaa la sheegay in calooshood u shaqeystayaasha Colombia uu ku amaray inay khaarajiyaan madaxweynaha ka dib markii uu ugu caga jugleeyay inuu xirayo.
Janaraal Jorge Luis Vargas ayaa sheegay Joseph Felix Badio uu markii hore u sheegay laba ka mid ah askartii hore ee Colombia oo mas’uul ka ahaa calooshood u shaqeystaasha Colombia inay soo xiraan madaxweyne ovenel Moise.
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta A.Madoobe oo bahdilay Lataliyihii Md Farmaajo, Go’aanka RW...
Hase yeeshee maalmo ka dib ka hor howlgalka ayuu Joseph Felix Badio u sheegay in qorshihii uu is baddalay sidaa darteed ay khaarajiyaan madaxweynaha. Mr Badio waxa uu ka mid ahaa dhowr qof oo liiska madow ugu jiray booliska Haiti. Waxaa lagu soo eedeeyay dil, abaabulka saadka, iibsashada gawaarida iyo isku dubaridka howlgalka kooxda dadka dila.
Hadalka Janaraalka ayaa imanaya iyadoo uu shalay madaxweynaha dalka Kolombiya Iván Duque uu sheegay in qaar kamid ah dadka reer Colombia ee lagu tuhmayo dilkii madaxweynihii Haiti Jovenel Moïse ay “aqoon durugsan” u lahaayeen qorshaha dilka hogaamiyahii Haiti.
Mr Moïse ayaa toddobaadkii hore lagu dilay gurigiisa iyadoo sidoo kalana xaaskiisa la dhaawacay.
Booliska Haiti waxay sheegeen in koox calooshood u shaqeystayaal ah oo ka koobnaa askar hore oo reer Colombia ah ay dileen Mr Moïse.
Mr Duque wuxuu sheegay in dadka reer Colombia badankood la khiyaameeyay maadama loo sheegay inay ilaaliyaal ka noqon doonaan Haiti.
Laakiin waxaa ku jiray koox yar oo iyaga ka mid ah oo aqoon buuxda u leh howlgalka, ayuu u sheegay idaacadda Colombia.
Wararka Maanta : Puntland oo saraakiil ciidan u xirtay baxsashada maxbuus ku xukunmaa dil...
28-ka nin ee la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada Kumaandooska ee dilay Mr Moïse, marka laga reebo laba ka mid ah waxay ahaayeen reer Kolombiya halka labada kale ay dhalasha Mareykan ah, asalkoodu yahay Haiti.
Wararka Maanta : Danjiraha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo xoghayaha difaaca Kenya oo ka...
Wararka Maanta : Daawo: Xildhibaan Aamina oo xog cusub ka bixisay kiiska Ikraan Tahliil...
Wararka Maanta : DF oo shaacisay inay howl-gal ku dishay 15 ka tirsanaa Al-Shabaab - Ca...
Wararka Maanta : Ciidamo uu horkacayey Saadaq Joon oo la wareegay Camaara - Caasimada O...
Wararka Maanta : Daawo Dabageed: Doorasho ka dhici meyso Beledweyne haddii aan hal arri...
Wararka Maanta : Golaha Ammaanka oo Cambaareeyay Tallaabo uu qaaday Turkiga - Radio...
Warka Caalamka9 mins ago
Wararka Videos24 mins ago